Tags Name magnetic - Shiinaha Ningbo Sine
Magnetic Magaca Badge sidoo kale loo yaqaan kaadhka magnetic ama magaca magnetic tag. Waxay ka kooban tahay laba xabbadood. Piece dibadda waa saxan bir ama caag ah oo cajalad double-dhinac. Piece guduhu waa la laba ama saddex magnet neodymium super xoog leh.
Magnetic magaca calaamad ka mid ah biraha magaca calaamad, magaca caag ah calaamad iyo kartoo magaca calaamad.
Features remanence High, xoog iyo qasab, tamar sare oo magnet ah ma wiiqi doonto. Si ka duwan clips ama biinanka, magnetic magaca calaamad kama dhibaysaan aad maqaarka ama dharka. Isticmaalka magacaaga calaamad ama kaarka ganacsi lifaaq gabal dibadda oo wuxuu dhigay meel ka baxsan dharkaaga. Markaas ku riday mid ka mid ah gudaha gudaha dharkaaga. Easy in ay isticmaalaan.
Kartoo magaca calaamad waa la heli karaa.
Open iyo Download buugga soo saarka ee magnetic magaca calaamad
Next: Magnet koolo